Umuntu ngamunye Thixo sakhe, umuntu ukuthi efuna ukulingisa. Ukuba nesithakazelo ekuphileni umsebenzi "isilwane" yakhe, sithola kuthe ukusondela kakhudlwana kuye, nokubukwa izinto ezithile uqale luqondane. Ngakho, a lot of abalandeli has Anatoly Tarasov, ogama biography ithakazelisa kakhulu futhi ezimibalabala. Lo muntu wazalwa phakathi nekhulu lamashumi amabili. Ngisho nangaleso sikhathi wayegcwele imibono kanye nezifiso. Cishe ngemva kweminyaka emithathu le nsizwa wakhonza kwesimo endaweni futhi Sabotage Battalion Panzer Army. Kuyo yonke le minyaka eyisikhombisa ezayo Anatoly wavakashela izingxenye ezahlukene zomhlaba, waba nengxenye imisebenzi eziyinkimbinkimbi (ezinye imithombo zithi inombolo ibikade kakade nanye), uye wathola imiklomelo eminingi futhi wazimisa njengonegunya umuntu.
Abantu abaningi banesithakazelo lo mbuzo: "Anatoly Tarasov biography" - futhi, eqinisweni, kukhona okuthile abangacabanga ngakho. Lapho lo muntu ephendukile engu-36 ubudala, wathola i-diploma kwelinye emayunivesithi adumile e Minsk. okukhethekile Wayengowesizukulwane nefilosofi. Ngemva kweminyaka emihlanu, Anatoly E. iziqu Academy of Pedagogical Sciences eMoscow. Ngemva nje kancane kwalokho, le ndoda yakwazi ukuvikela mqondo wakhe, okuyinto wayezinikele ukuthi ubugebengu, kodwa Taras wafunda kuphela ukuziphatha intsha kanye nabantu abasha. Kwaphela iminyaka eminingana wayesebenza e-Institute, wahlanganyela ukutadisha kwengqondo izici ehlukile ye izaphula-mthetho.
Anatoly Efimovich Taras uyakuthanda ukulwa Melee futhi izifundo ukuwo ezivikela. Ngaphezu kwalokho, wafundisa ngaso sikhungo, wahlanganyela ukushicilela futhi wasebenza ingxenye umhleli sikhathi, indoda echitha isikhathi esiningi kwezemidlalo kanye nokuzivocavoca. Okuthe ngikulokho wathola ibhande black in Jiu-Jitsu futhi viet-vo-dao. Ekuqaleni uthando lwakhe Taras Anatoly Yefimovich aqeqeshwa ngu wabafundisi best of the amayunithi ekhethekile intelligence lempi yokulwa. Inkosi yayo baba Nguyen Giang - ". kaJehozadaki Kong" induna Vietnam Yabantu Army Ngemva kwesikhashana le ndoda ngokwakhe waba Umqeqeshi, umeluleki intsha futhi uyifundisa amasu ukuzivikela. Waqala ukuqhuba izingqungquthela, futhi ngo-1992 eshicilelwe umagazini ayo karate ebizwa ngokuthi "Awe-Kenpō". Le ndlela usuthandwa kakhulu emazweni CIS.
Wonke umuntu oseqinile owazi Anatoly Tarasov. Umlando wakhe olunzulu futhi inemibalabala, egcwele izenzakalo ezahlukene. Uma indoda wahlanganyela ukushicilelwa iphephabhuku, waqala ukuzama ukubhala incwadi, futhi muhle at it. Izimpikiswano main babé izindlela ukulawula ezivamile futhi self-ukuvikelwa. Ngiqinisekile nezwa uhlelo akhiwa Anatoly onesihloko esithi "Ukulwa Machine" abaningi. Namuhla, it is esetshenziswa emadolobheni ahlukene kule planethi yethu. videocourses futhi zenzelwe uhlelo ngenhla. Wonke umuntu ofuna ukufunda amasu karate, ungazama ukusebenzisa le ndlela. Sicabanga kwakuthakazelisa ukuthola ngubani Anatoly Tarasov. Biography of lowo muntu - isibonelo acacile omoya namandla womunye umuntu. Akwaziwa kwentuthuko emhlabeni wonke baye benza lo mdlalo ukhange ngokwengeziwe esizukulwaneni esisha.
Zingaki kilojoule amagilebhisi of izinhlobo ezahlukene.
Sumy esifundeni: emizaneni, izifunda, amadolobha. Trostyanets, Akhtyrka, Sumy esifundeni
Ingabe ngenza ipasipoti ngaphandle kamazisi yasebusosheni?